Zonke amantombazane ufuna ukubukeka emuhle futhi imfashini. Futhi amantombazane nje kuphela kodwa futhi abesifazane ubudala phakathi akusho zisale ngemuva imfashini. Phela, ngezinye izikhathi ubona ugogo ivunule ukuze awekho emagama. Kukhona jauntily, yakhiwa, isigqoko khona ngezimpaphe bese umzimba ihembe - ntswininiza zokugcina. Ukwanelisa amehlo. Lokho ngempela ucabanga ukuthi ubuhle futhi bathande bonke ubudala.
Kukhona nje kungukuthi kokubona izimangaliso esikhathini sethu. Girls ukubukisa izingubo okungenani, ukuhlobisa ngokwakho tattoo, umzimba art kanye Ukubhoboza. Kusukela ngaphansi izihloko, amboze amabele akho zabesifazane abasha abheke izingono nokunwebeka ukubeka phezu kwabo imihlobiso. Ngezinye izikhathi ubheka zimangaliso kanye unxusa umbuzo: "Kungani wabhoboza izingono?" Nakuba impendulo, nokunye ebusweni. isigamu yethu ebuthaka unamandla kakhulu ngokuya ubuciko yokudweba emzimbeni. Phela, kubonakala langa sibalo insikazi amaphethini angavamile. Ake sibone, kungani izingono beloveds yethu abamhlaba? Njengoba umkhuba ubonisa, kuba lemukelekako, ngomqondo wokuthi izimpahla emzimbeni umlingani wakhe Kwaba yinto emnandi ababengayilindele. Lapho yena esondelene ihora embhedeni okufanayo uthandana Cavalier wakhe, futhi yayingakaze ngisho kubonakala charm wakhe, khona-ke, kholwa kimi, ingono ukubhoboza waphenduka izinhloko iyiphi suitors, kuya eyinkimbinkimbi kakhulu. Uma yena abamhlaba izingono babeka ukuba idayimane namacici, wena-ke yazini ukuthi intombi yakho othanda wena ungacabangi mayelana nanoma ubani omunye. Uma wafaka ezinye imigexo emihle, okusho charm senzelwe wena, kodwa kufanele ucabangani mayelana isipho ezibizayo ukuze ubuhle kwakhanya ebumnyameni.
uthathe leso sinyathelo cute intombi niyazenza futhi ukuzizwa ekujabuliseni inkanuko othandweni imidlalo. Ukubhoboza iningi labesifazane kuqinisa umqondo thinta ithenda yabo izingono. Nomthwebuli njalo ufuna ukukhombisa futhi ukufundisa umzimba wakho indoda abathandekayo, futhi ukuze wazi ukuthi uma abamhlaba izingono, ke isenzo senzelwe ngokuyinhloko ngawe. isigamu eqinile futhi bavame ukwenza izinqumo ezibenza ukubhoboza kule ngxenye esifubeni. Nakuba-ke kubhekwa indawo okhanga kwebele wesilisa, hhayi ingono, kodwa ngaphezu ubulili babo kwabesilisa niqhubeke isinyathelo eyinkimbinkimbi enjalo wayithatha inhliziyo othandekayo wakhe. Lapha, ingqondo kusikisela ukuthi ngandlela-thile, bonke laba imihlobiso zenziwa nge nenjongo etusekayo - ukuziqhakambisa wena othandekayo. Kwezinye izimo - intela ukuze aqondise.
Izibalo zibonisa ukuthi ngisho strippers in the amakilabhu anezingoni abamhlaba uthole kuka ubuhle efanayo ebabazekayo ngaphandle Ukubhoboza. Namuhla, cishe njalo ubuhle salon inikeza isevisi lubhoboze izingxenye ezihlukahlukene zomzimba. Ngakho-ke, namuhla abaningi ngokuvamile ungakwazi ukubukela amantombazane izingono abamhlaba. Isithombe ukuthi esikubonayo omagazini abesifazane futhi ubuhle salon, ukunikela izithombe ezimangalisayo yomzimba wowesifazane, ehlotshiswe Ukubhoboza. Ungakwazi ukuchitha amahora ekuthandeni ubuhle of it. Kunoma yikuphi kusobala ukuthi onjalo enkingeni yesikhashana njengoba wokubhoboza kubuhlungu ulungisisa utshalomali. Futhi ngakho-ke akudingekile ukuba abuze lo mbuzo: "? Izingono Kungani abamhlaba" - uma isilwane sakho ngokuzumayo kubaneka ebusuku nge diamond elengayo.
Indlela ubophela isikhafu phezu elingenamikhono
Imenyu ngosuku esenzeka ngalo indlu: izakhi edingekayo
Kungani dieffenbachia - imbali kobumsulwa?